Burcad Badeed Madax Furasho qaadatey siideysayna Markab. [Akhris …] – Radio Daljir
Burcad Badeed Madax Furasho qaadatey siideysayna Markab. [Akhris …]
Eyl, June 28- Burcad badeed Soomaali ah ayaa waxaa ay sii daayeen Markab laga leeyahay dalka Belgiam kaas oo labo Bilood ka hor ay ka qafaasheen meel ka baxsan biyaha Afrikada, sida ay sheegtey dawaldda dalka Belgiam.
Ra?iisul Wasaaraha dalka Belgium Mr Herman Van Rompuy ayaa uu sheegey in dhammaanba ay bad qabaan shaqaalihii saarnaa Markabkaasi ee muddaba afduubka loogu heystey xeebaha dalka Soomaaliya.
Agaasimaha Xallinta dhibaatooyinka ee dalka Belgium ayaa waxaa uu sheegey in lacag madax furasho ah laga dhiibey Markabkaasi iyada oo uusan carrifin inta ay le?egtahay lacagtaasi.
?Diyaarad ayeey kireysteen Shaley, dayaaraddana waxaa ay dul tagtey Markabka waxaana ay ku dultuurtey, Dallaayad uu santuukh ku xiranyahay, Santuukhana waxaa ku jirtey lacag Madax furasho ah, sidaas darteedna waxaa la bixiyey lacag Madax furasho ah? ayuu yiri Jack Raaz.
Markabka ayaa waxaa saarnaa shaqaale dhan illaa iyo Toban waxaana ay u kala yihiin Naakhuude Dutch ah, Labo Belgium ah, Saddex Filibiin ah iyo Afar Kuruwaat ah.
Xilligi La qafaashey Markabkaan ayaa waxaa uu ku aaaddan 18 bishii April isaga oo ay ka qabsadeen koox Burcad badeed ah meel 150 KM waqooyiga kaga began badda Jasiiradda ku taal Afrika Bari ee Sycheles.
Markabkaas oo laga laha dalka Belgiam ayaa waxaa uu ka mid ahaa in ka badan Soddomeeyo Markab oo sanadkaan lagu qafaashey Badda ku xeeran Soomaaliya iyada oo ay wali gacanta ugu jiraan Afduubayayaasha Tiro aad u badan oo maraakiib ah oo laga leeyahay waddamo fara badan.
Sidoo kale Burcad badeedda ayaa waxaa gacanta ugu jira dad aad u badan oo u kala dhashey Qaaradaha dunida, iyaga oo qaarkoodna gacanta ku haya muddo sanad ku dhaw.